Fahasamihafana eo amin'ny Alkali sy Alkaline | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Alkali sy Alkaline | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / fahasamihafana eo amin'ny Alkali sy ny alkaline
Fahasamihafana eo amin'i Alkali sy Alkaline
16 Oktobra 2011 Narotsak'i Admin
Amin'ny ankapobeny, ny alkaly dia ampiasaina hanondro ireo toby. Izy io dia ampiasaina ho anarana ary ny alkaly dia ampiasaina ho toy ny adjectif. Na izany aza, amin'ity toe-javatra ity dia ampiasaina izy ireo hanondroana ny metaly vondrona 1 sy vondrona 2 ao amin'ny tabilao maharitra. Na izany aza, rehefa ampiasaina hanondroana singa izy ireo dia matetika ny metaly alkaly sy metaly alkaly tany no ampiasaina.
Alkali dia teny iray matetika ampiasaina amin'ny metaly ao amin'ny vondrona 1 amin'ny latabatra maharitra. Ireo koa dia fantatra amin'ny anarana hoe metaly alkaly. Na dia tafiditra ao amin'ity vondrona ity aza i H, dia somary hafa ihany. Noho izany, lithium (Li), sodium (Na), potassium (K), Rubidium (Rb), Cesium (Cs) ary Francium (Fr) dia mpikambana ao amin'ity vondrona ity. Ny metaly alkali dia metaly miloko malefaka, mamirapiratra. Izy rehetra dia manana elektron iray monja ao anaty akorany ivelany, ary tian'izy ireo esorina izany ary hamorona cations +1. Rehefa faly ny ankamaroan'ny elektronika ivelany dia miverina amin'ny tany izy io ary mamoaka taratra eo amin'ny faritra hita maso. Ny famoahana an'ity elektron ity dia mora, noho izany dia tena mihetsika ny metaly alkali. Mampitombo ny tsanganana ny fihetsika azo averina. Izy ireo dia mamorona fitambarana ionic miaraka amin'ny atôma elektrônôgrafia hafa. Ny marimarina kokoa, ny alkali dia entina ilazana ny gazy karbonika na ny hidrokidran'ny metaly alkali. Izy ireo koa dia manana fananana fototra. Mangidy izy ireo amin'ny tsiro, malama, ary mihetsika miaraka amin'ny asidra mba hahatonga azy ireo tsy hanana toerana ambony.
'Alkaline' dia manana fananana alkali. Ny singa 1 sy ny vondrona 2, izay fantatra ihany koa amin'ny metaly alkaly sy metaly alkaly, dia heverina ho alkaly rehefa mihalefaka ao anaty rano. Ny sasany amin'ireo ohatra dia ny hydroxide sôdiôma, ny potasiôma hidroksida, ny magôniôma hydroxide ary ny gazy karbonika. Arrhenius dia mamaritra ny fototra ho toy ny akora mamokatra OH - amin'ny vahaolana. Molekiola any ambony no mamorona OH - rehefa levona anaty rano, dia mihetsika toy ny fotony. Mora mihetsika ny vahaolana alkalin amin'ny asidra mamokatra molekiola misy sira sy sira. Izy ireo dia mampiseho sanda pH avo kokoa noho ny 7 ary mivadika manga ny litma mena. Misy toby hafa ihany koa afa-tsy ireo toby alkaline toa ny NH 3 . Izy ireo koa dia manana fananana fototra mitovy.
Ny alkaline dia azo ampiasaina ho adjectif hamaritana ny toetra fototra; koa, ny alkaly dia azo ampiasaina manokana hiatrehana ireo singa 2, izay fantatra koa amin'ny hoe metaly tany alkaly. Izy ireo dia misy Beryllium (Be) magnesium (Mg), calcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba), ary radium (Ra). Izy ireo dia singa malemy sy mihetsika. Ireo singa ireo dia manana fahaizana mamorona c2 +2; noho izany, manaova sira ionic miaraka amin'ny singa electronegative. Rehefa mihetsika amin'ny rano ireo metaly alkaly dia mamorona hydroxide alkaly (tsy mihetsika amin'ny rano ny beryllium).
Inona no mahasamihafa an'i Alkali sy Alkaline?
• Ny teny Alkali dia ampiasaina hamantarana ireo singa vondrona 1, lithium (Li), sodium (Na), potassium (K), Rubidium (Rb), Cesium (Cs) ary Francium (Fr). Ny teny alkaline dia ampiasaina hanehoana singa 2 Beryllium (Be) manezioma (Mg), calcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba), ary radium (Ra). Ny metaly alkali dia mihetsika kokoa noho ny metaly alkaly eto an-tany.
• malefaka kokoa ny metaly alkali noho ny alkaly.
• Ny alkalis dia manana elektron iray ao anaty akorandriaka ivelany indrindra ary ny metaly tany alkaly dia manana elektrôna roa.
• endrika alkali +1 cations, ary form alkaline +2 cations.
Fahasamihafana eo amin'ny asidra sy ny alkaline Fahasamihafana eo amin'i Alkali sy ny Base Fahasamihafana eo amin'ny magnesium sy magnesium oxide Fahasamihafana eo amin'ny asidra sy ny fotony Fahasamihafana eo amin'ny magnesium sy magnesium Citrate
Filed Under: Chemistry Tagged With: alkali , alkali metal , alkaline , alkaline metal metal , alkaline vs , Arrhenius base , barium , bases , beryllium , Calcium , vondrona 1 metaly , group 2 metals , Magnesium , radium , strontium
Fahasamihafana eo amin'ny Indreo elektroda sy ny elektroda fanovozan-kevitra
Fahasamihafana misy eo amin'ny ilana sy ny tokony
Fahasamihafana eo amin'ny toetra sy ny fitondran-tena
Fahasamihafana eo amin'ny Bit sy Byte
Fahasamihafana eo amin'ny sarany sy ny vidiny